Maxay Macallimiintu Qaati Uga Taagan Yihiin Ardayda Isticmaasha TikTok? - Xogside-news
Home WARARKA CAALAMKA Maxay macallimiintu qaati uga taagan yihiin ardayda isticmaasha TikTok?
Macallimiin caga-jugleyn kala kulmay arday isticmaasha barta TikTok ayaa sheegay inay xadka ka sii baxayaan tacaddiyada ay kala kulmaan baraha bulshada.
Tom Rogers wuxuu ka mid yahay dhowr macallin oo UK u dhalatay kuwaas oo sheegay in toddobaadyadii la soo dhaafay ay tacaddiyo kala kulmeen baraha bulshada.
Waxyaabaha ay ardaydu soo dhigaan barta TikTok waxaa ka mid ah qalabka waxbarashada ee ay macallimiintu u adeegsadaan wax ku baridda ardayda qaabka online-ka, maaddaama haatan dunida uu ka jiro xanuunka safmarka ah ee coronavirus.
TikTok ayaa sheegay inuu tallaabooyin dheeraad ah qaadayo si meesha looga saaro muuqaallada lagu weerarayo macallimiinta.
Dowladda Britain ayaa iyadana qorsheyneysa inay la timaaddo shuruuc lagula xisaabtamayo baraha bulshada.
Rogers, oo ah macallin dhiga maaddada taariikhda, ma uusan ogeyn in qeyb ka mid ah muuqaalka cashar uu bixinayay la dhigay barta TikTok ilaa mid ka mid ah macallimiinta ay isla shaqeeyeen uu ku wargeliyay.
Markii uu baaritaan ku sameeyay, wuxuu helay labo muuqaal oo akoon aan la aqoon la soo dhigay, kuwaas oo ay daawadeen dad gaaraya 12,000 oo qof.
“Marka aad gasho app-ka, waxaad moodeysaa in carruurtu ay adiga kugu qoslayaan iyo inuu qof walba arkay,” ayuu BBC-da u sheegay.
“Ma garan kartid qofka arkay, balse waxaad ogtahay inay carruur badan daawadeen.”
Rogers ayaa dacwad ka gudbiyay muuqaallada, balse booliisku waxba kama aysan qaban.
Macallinka ayaan sidoo kale wax jawaab ah ka helin TikTok muuqaalladuna weli way ku jireen bartaas markii la daabacayay maqaalkan.
Tom Rogers ayaa isagoo cashar bixinaya la soo dhigay TikTok
Rogers ayaa sheegay inuu isku dayo inaysan dhaawicin tacaddiyada uu kala kumo baraha bulshada, balse uu ka walaacsan yahay macallimiinta kale ee aan wax badan kala socon baraha bulshada.
“Waxaan u maleynayaa inay tan xadka dhaafeyso marka la eego wixii na soo maray labadii sano ee la soo dhaafay,” ayuu yiri, isagoo intaa ku daray in qaar ka mid ah saaxiibbadiis ay ku sugan yihiin xaalad aan fiicneyn.”
“Way ka tegi doonaan shaqooyinkooda xanuunno ayayna ka qaadi doonaan,” ayuu intaas raaciyay.
“Tani waa mid ka duwan”
Tom Quinn, waa bare iyo madaxa hay’adda Frank Field Education Trust oo ku taalla waqooyi-galbeed England, ayaa BBC-da u sheegay in macallimiinta ay la xanuunsadeen tacaddiyada iyo inay tahay in baraha bulshada ay deg deg wax uga qabtaan si meesha looga saaro muuqaallada.
“Sanadihii la soo dhaafay, macallimiinta iyo ardayda waxay lahaayeen xiriir, waa xiriirka kaftanka; waxay isu bixiyeen naaneeysyo. Tani waa mid ka duwan waxyaabahaas,” ayuu yiri.
“Markii uu cunug soo qoro faallo aflagaaddo wadata soona dhigo TikTok waxaa arki kara malaayiin qof oo dunida ku nool. Taasi runtii saameyn weyn ayay leedahay marka macallinku uusan xaq u lahayn inuu jawaabo.”
Quinn ayaa sheegay in ururka uu kala shaqeynayo carruurta waaliddiinta muuqaallada dhigay bartaas si ay u fahmaan dhibaatada ay arrintaas leedahay.
Caawinaad loo fidinayo macallimiinta
Afhayeen u hadlay TikTok ayaa sheegay in dhibaatada iyo tacaddiyada “aysan meelna ka soo galin” bartaas.
“Waxaan ka shallaayneynaa dhibka ku dhacay qaar ka mid ah macallimiinta sababo la xiriira waxyaabaha aflagaaddada leh ee la soo dhigo barteenna,” ayuu yiri.
Wuxuu intaas ku daray in TikTok uu kordhin doono kharashka loogu talogalay in lagu hirgeliyo hannaan online-ka ah oo ay macallimiintu ku soo sheegayaan waxyaabaha aflagaaddada ku dheehan tahay ee bartaas la soo dhigo.
“Waxaan iskuul walba oo dalka ku yaalla ku wargelin doonnaa inay hubiyaan in dhammaan shaqaalaha ay helaan waxyaabaha ay u baahan yihiin waxaana sii wadi doonnaa la shaqeynta iskuullada, macallimiinta, waaliddiinta, ururrada iyo dadka kale ee uu dhibku gaaray si meesha looga saaro tacaddiyada aan loo dulqaadan karin.” Ayuu yiri Tom.
Maxay macallimiintu qaati uga taagan yihiin ardayda isticmaasha TikTok
Previous articleMaxay qoyska duuliye Fu’aad Yuusuf ka yiraahdeen xukunka lagu riday?
Next articleWaa maxay xanuunka macaanka sidee ayaadna uga hortagi kartaa?